American Airlines dia nanambara ny Miami Direct mivantana amin'ny sidina Dominica
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao » American Airlines dia nanambara ny Miami Direct mivantana amin'ny sidina Dominica
Airlines • Airport • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao Mafana Dominica • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Nanambara ny minisitry ny fizahantany Denise Charles fa ity serivisy vaovao ity dia ho mpanakalo lalao ho an'ny indostrian'ny fizahantany any Dominica satria hamela ny fidirana mivantana sy mivantana avy amin'ny tanibe amerikana, iray amin'ireo tsena loharanom-pahalalana lehibe.
Ny serivisy vaovao dia hiasa indroa isan-kerinandro amin'ny alarobia sy asabotsy.
Hiainga ny seranam-piaramanidina iraisampirenena Miami amin'ny 11ora maraina ary tonga ao amin'ny seranam-piaramanidina Douglas-Charles amin'ny 3:21 hariva.
Hiainga an'i Dominica amin'ny 4:24 hariva ny sidina ary tonga any Miami amin'ny 6:55 hariva.
Faly ny minisiteran'ny fizahantany, ny fitaterana iraisam-pirenena ary ny hetsika an-dranomasina fa hanamafy izany American Airlines Ny serivisy jet dia hanomboka asa voalohany eo anelanelany Miami (MIA) ary Dominica (DOM) manomboka ny Alarobia 8 desambra 2021. Hatao indroa isan-kerinandro ny serivisy amin'ny Alarobia sy sabotsy, miainga amin'ny seranam-piaramanidina iraisampirenena Miami amin'ny 11 maraina ary tonga ao amin'ny seranam-piaramanidina Douglas-Charles amin'ny 3:21 hariva. Ny sidina miverina dia hiala ao Dominica amin'ny 4:24 hariva ary tonga any Miami amin'ny 6:55 hariva. Ny fiaramanidina dia ho fiaramanidina Embraer miaraka amina kilasy fandraharahana, toerana lehibe sy seha-pihariana fanampiny.
Ity fanapahan-kevitra lehibe nataon'ny American Airlines ity dia tonga taorian'ny sidina nahomby izay niseho tany Dominica tamin'ny 22 Jona 2021. Ny minisitry ny fizahantany Denise Charles dia nanambara fa ity serivisy vaovao ity dia ho mpanakalo lalao ho an'ny indostrian'ny fizahantany any Dominica satria hamela fidirana mety sy mivantana avy any amin'ny tanibe Etazonia, iray amin'ireo tsenan'ny loharano lehibe. Ankoatr'izay, ny fanapahan-kevitry ny American Airlines hanompo an'i Dominica dia manamafy ny volavolan-kevitr'i Dominica amin'ny maha-fizahan-tany fizahan-tany azy ary handray anjara betsaka amin'ny fanatratrarana ny tanjon'ny mpitsidika 200,000 2025 amin'ny XNUMX. Nanambara ihany koa ny minisitra fa ity dia dingana lehibe iray amin'ny famahana ny fidirana faneriterena natrehin'ny toerana aleha nandritra ny taona maro. Ny fidirana mivantana dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fanitarana ny fizahan-tany, fampivelarana ny varotra, indrindra ho an'ny MSME, ary fanamorana ny fifandraisan'ny fianakaviana sy ny orinasa.
Talen'ny fizahan-tany Andriamatoa Colin Piper dia nanambara fa amin'ity serivisy vaovao ity dia hahatoky tena bebe kokoa ireo mpandraharaha mpizahatany monina any Etazonia fa hanampy an'i Dominica amin'ny tolotra vokariny. Dominica dia handray soa amin'ny fampiroboroboana isan-karazany ny fianakavian'i Dominica momba ny varotra sy ny fananana avo lenta, ary koa ny traikefa antsitrika, fitsangantsanganana, fahasalamana ary sakafo ho an'ny mpanjifany. Ireo mpitsidika avy any Etazonia izay liana te-ho tonga any Dominica dia ho afaka ho tonga mora etoana kokoa manomboka amin'ny fotoana handaminana ny sidina ka handehanana any Dominica.
Ny American Airlines dia mientanentana hatrany amin'ity sidina mivantana vaovao ity. "Faly izahay fa manohy manamafy ny fisianay any Karaiba miaraka amin'ny toerana roa vaovao natomboka tamin'ny Desambra, Dominica sy Anguilla, manome ny mpanjifanay fidirana bebe kokoa amin'ireo toerana tian-dry zareo haleha," hoy i Jose A. Freig, filoha lefitra amerikanina ho an'ny Iraisam-pirenena. "Miaraka amin'ireo fanampiana ireo ny tambajotranay, ny Amerikanina dia hanompo toerana 35 any Karaiba - ny ankamaroan'ny mpitatitra any Etazonia".